gobolka Banaadir uma baahna Senatoro lasoo magacabo wuxuu u baahan yahay golayaal shacabku soo doortaan – LaacibOnline
gobolka Banaadir uma baahna Senatoro lasoo magacabo wuxuu u baahan yahay golayaal shacabku soo doortaan
Arbaco, July 1, 2020 (HOL) – Guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka wadajir, siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay gobolka Banaadir in uusan u baahnayn Senatoro lasoo magacaabo, balse uu u baahan yahay golayaal degaan oo heer federal ah.Gudoomiyaha Wadajir ayaa sheegay 13-ka kursi ee barlamaanku u meel mariyay matalaada aqalka sare ee gobolka Banaadir in aysan waxba soo kordhindoonin islamarkaana ujeedada laga leeyahay ay tahay olole doorasho.“Haddii Muqdisho lala doonayo horumar waa inay heshaa golayaal degaan oo ay dadku soo doortaan oo lala xisaabtami karo waxna ka qaban kara dhibaatooyinka haysta shacabka gobolka Banaadir ee maalin walba canshuurta lagu kordhinayo jidadkana laga xirto,” ayuu yidhi siyaasi Cabdiraxmaam Cabdishakuur.
Cabdiraxmaam Cabdishakuur wuxuu sheegay guddonka barlamaanka Soomaaliya in sanad kahor loosoo gudbiyay mooshin ku saabsan in ay Muqdisho hesho maqaamka iyo matalaad dhab ah, balse wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in guddoonka barlamaanka uu diiday in laga doodo mooshinkaas.
“Siyaasadu waa game, anigu waxaan leeyahay xildhibaanow haddaad Muqdisho u hiilinaysaan soo saara mooshinka ay hoosta ku haystaan Muudeey iyo Mursal, markaas ayay Muqdisho helaysaa matalaadii dhabta ahayd.
Guddoomiyaha xisbiga Wadajir wuxuu tilmaamay dad badan oo uu kamid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir inay xilakoodiii ku waayeen iyagoo raadinaya Muqdisho maqaamkeeda.
” Muqdisho dadkii matalaada u raadinayay waala raacdeeyay, xildhibaanadiina mooshinkii hoosta ayaa laga dhigtay. Anagiina waxaa nala leeyahay Muqdisho kuraas ayaan idin siinay. Dad badan ayaa igu yidhi, Cabdiraxmaanow doorasho ma rabtid miyaa? maxaad tolkaaga iskugu diree? Anigu tolkayga hadday rabaan wax dastuurka khilaafsan, anigu waxaan ka shaqeeyaa in la helo wax is-waafaqsan,” ayuu hadalkiisa ku daray.
← For 30 years, Somalia ignored its youth and failed; it is time to give them a chance
Big Christian Pulisic decision as Mateo Kovacic starts – Predicted Chelsea team vs West Ham →
Isniin, Sept 21, 2020-Askar ilaalinayay Guddoomiye waaxeed oo laga Af-duubtay Gasarbaalley
Isniin, Nov 23, 2020-James Swan oo warbixin ka siinaya golaha amaanka doorashooyinka Soomaaliya iyo xaalada amaanka
November 23, 2020 Abdirisaaq 0
Isniin, Sept 21, 2020-Darawal moota Bajaaj oo lagu dilay Magaalada Muqdisho